Meles Zanawi oo soo gudbiyay liiska xildhibaano cusub iyo muran ka dhashay arintaasi | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Meles Zanawi oo soo gudbiyay liiska xildhibaano cusub iyo muran ka dhashay arintaasi
06.04.2012 – Iyadoo Dhawaan la filayo in la soo xulo xildhibaano cusub oo matala baarlamaanka Soomaaliya kuwasoo iyagana soo dooran doona madaxweyne cusub bisha augost ayaa waxaan durbadiiba bilowday muran ku aadan cidii ka mid noqon laheyd baarlamanka cusub.
Meles Zanawi ra’iisal wasaaraha dalka Itoobiya ayaa markii uu ciidamadiisa kala baxayey Soomaaliya waxa uu sii sameystay barnaamijyo badan oo uu ku fashilinayo dowladd ka dhalata Soomaaliya ama koox kamid ah garabyada hubaysan oo dalka xoog ku kula wareega.
Meles ayaa marka hore waxa uu sameeyay oo hub aad u fara badana siiyay maleeshiyaadka AhluSunna waljaeeca ee ku sugan gobolada dhexe iyo Gedo,sidoo kale waxa uu xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ka dhexsameystay kooxo uga adeega danahiissa guracan uu ka leeyahay soomaaliya.
Shirar ka dhacay Muqdisho,Garoowe 1,2 iyo Gaalkacyo oo looga hadalayey arimaha dastuurka iyo sidii loo soo xuli lahaa xubnaha ka mid noqaya baarlamaamka cusub ee dhawaan loo balan sanyahay in loo sameeyo dalka Soomaaliya,ayaa leysku afgartay qaabkii loo waji lahaa.
Qodabadii lagu heshiiyay ilaa hadda ayaa waxaa ka mid ahaa,in marka hore la soo xulo 850 qof oo ka kooban qabiilada soomaalida,kuwasoo iyagana soo xuli doona xildhibaano aqoon fiican leh sidoo kalana aan wax danbi ah ka gelin dalka.
Haddaba iyadoo dhawaan loo diyaar garoobayo soo xulitaanka xildhibaano cusub ayaa sida ay inoo shegeen dad xog-ogaal ah jiritaanka liis magacyo ay ku qoran yihiin oo uu soo gudbiyay Meles Zanaawi,waxayna arintaan buuq ku furtay dad loo xilsaaray howshaan.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Itoobiya waxaa lagu xantaa ama qeybaha kala duwan Bulshada Soomaaliyeed ku guuxaan inuu yahay shaqsi si aad ah u bartay Dhaqanka xun ee is rog roga ee Soomaalinimadu ku yar tahay,isagoo muddo aad u dheer ku noolaa magaalada Muqdisho.
Dalka Itoobiya oo aan wali ka quusan in Soomaaliya ay dibin daabyo u dhigaan, isla markaana ka shaqeeyaan sidii ay u dhibaatayn lahayd Shacabka Soomaaliyeed, iyagoo mar walba ka faa’iidaysanaya kooxo Calooshood u shaqeystayaal ah oo aan rabin jiritaanka iyo bad baadada shacabka Soomaaliyeed.
Siyaasada Soomaalida Jaaliyadaha beesha Hawiye ee Yurub iyo Ameerika oo cambaareeyey xasuuqii tiyaatarka kuna baaqay in lacag la dul dhigo madaxyada Cali Dheere, Fuaad Shongole iyo Axmed Godane